အလင်းတစက် (Light) | Local Resources Centre
ဦးအောင်စိုးသည် အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် လည်းကောင်း ၊ ဒေါ်ခိုင်သည် စာရင်းကိုင်အဖြစ် လာည်းကောင်း အနာဂတ်ရောင်ခြည်အသင်းတွင် တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြသည်။ အနာဂတ်ရောင်ခြည်အသင်းသည် ယခင်က ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါနှင့်ဆိုင်သော စီမံကိန်းများကို တစ်စိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင်မူ ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ စီမံချက်များ ၊ လူငယ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသော စီမံချက်များကိုလည်း ပူးတွဲလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
အဖွဲ့အစည်းမှ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ထိုစီမံချက်များမှာ အသုံးပြုသော ငွေပမာဏများပြားခြင်းကြောင့် တစ်ကြောင်း ၊ စီမံချက်အကောင်အထည်ဖော်ရန် သတ်မှတ်ထားသော ဧရိယာကျယ်ဝန်းခြင်း စသည်တို့ကြောင့် စီမံချက်မှ ချမှတ်ထားသော ပန်းတိုင်မှာလည်း ကြီးမားကြောင်းကို ဦးအောင်စိုးမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
U Aung Soe and Daw Khine was telling about the Future Light Organization
သို့ရာတွင် Future Light အသင်းသည် ၎င်း၏ စီမံချက်အကောင်အထည်ဖော်ရန် နေရာသတ်မှတ်ရာတွင် သတ်မှတ်ချက်များရှိကြောင်းကို “သူတို့သွားတဲ့ Youth project ကလည်း ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်။ သူတို့ကဒီ ကျေးရွာ ၊ မြို့နယ်ထဲမှာတောင်မှ တစ်ကယ့် ချို့တဲ့ တဲ့ ကျေးရွာကို ရွေးတယ်။ ဝေးလည်းဝေးတယ်လေ အရမ်း။ ဘာစီမံချက်မှ မရှိတဲ့ရွာမျိုး ၊ လုံးဝဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိတဲ့ကျေးရွာမျိုး ၊ အဲ့မျိုးရွာကို သူတို့ကရွေးတယ်။” ဟု ဒေါ်ခိုင်မှ ပြောသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဦးအောင်စိုးနှင့် ဒေါ်ခိုင်သည် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့မှ ရံပုံငွေဖြင့် Youth Empowerment စီမံချက်ကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ Future Light အဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသော စီမံကိန်းဧရိယာများနှင့် မထပ်အောင် စီစဉ်၍လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းကို “ကျွန်မတို့လုပ်တဲ့ ဧရိယာက သူတို့လုပ်နေတဲ့ ဧရိယာနဲ့မထပ်ဘူး။ သူတို့လွတ်နေတဲ့ နေရာလေးကို ကျွန်မတို့ နည်းနည်းလိုက် ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သဘောပေါ့။” ဟု ဒေါ်ခိုင်မှ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဦးအောင်စိုးနှင့် ဒေါ်ခိုင်သည် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့မှ လုပ်သော အစည်းအဝေးပွဲတစ်ခုတွင် အသေးစားရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း အစီအစဉ်နှင့် ဆက်စပ်၍ Youth Empowerment စီမံချက်အား ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့နှင့် လက်တွဲအကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်သွားပုံကို “Proposal မတင်ခင်မှာ community assessment တစ်ခု သွားလုပ်တယ်ပေါ့။ ယခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဟာတွေနဲ့ လိုက်လည်းလိုက် ကိုက်လည်းကိုက်ညီအောင်ဆိုပြီးတော့ ကျွန်မတို့ Field ထဲမှာ သွားပြီးတော့ community assessment လုပ်တဲ့အခါမှာ လူငယ်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ တွေ့လာရတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ဒီ Youth Empowerment project ကို ကျွန်မတို့ ရေးဆွဲလိုက်တာ” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Both U Aung Soe and Ma Khine are working at Future Light Organization. U Aung Soe is an Assistant and Daw Khine is an Accountant. Future Light Organization is well known for its previous projects of HIV projects. However, it is currently implementing Child project and Youth project instead.
Those ongoing projects by the organization is implementing in various area since the amount is vast enough to cover many area as well as it is able to full fill more than one targets indeed.
Nonetheless, Future Light sets many criteria on choosing project areas, “They have their way of implementing style. They chose the most remoted area where there have no development projects or any other project before. Furthermore, their targeted area is wide” said by Ma Khine.
On the other hand, U Aung Soe and Daw Khine is implementing Youth Empowerment project with Local Resource Centre (LRC). However, in case of overlapping with Future Light Organization’s projects, “We have managed not to overlap projects as we are supposed to fill the gap” by Ma Khine.
Ma Khine also explained about how they both got contact with LRC to implement this project. She mentioned that “We first did community access before we wrote the proposal. In order to match with the current projects of our mother organization, we went field visit and did community access. According to field visit, we found that there is some requirement concern with youth and that’s how we drew Youth Empowerment project”.
After the Youth Empowerment project, U Aung Soe and Ma Khine work continue at their mother organization.